यी ४ राशिका पुरुष हुन्छन् प्रफेक्ट, जसले आफ्नो प्रेमिकालाई गर्छन् आफूभन्दा बढी माया....जानिराखौ ! —
यी ४ राशिका पुरुष हुन्छन् प्रफेक्ट, जसले आफ्नो प्रेमिकालाई गर्छन् आफूभन्दा बढी माया….जानिराखौ !
एजेन्सी । विवाह बन्धनमा बाँधिनको लागी महिला पुरुष दुवैले निकै सोचविचार गरेर निर्णय लिएका हुन्छन् । विवाह अघि नै महिला पुरुष दुवै जनाले यस्तो जीवन साथी होस् भन्ने सोच्छन् जसले उनीहरूलाई जिन्दगीभरिको साथ दिइरहोस् । विवाह पछि जीवनमा आउने हरेक दुख सुखमा जीवन साथीले साथ दिइयोस् भन्ने सबैको चाहाना हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका पुरुषहरूले आफ्नो प्रेमिका, श्रीमतीलाई अौधी माया गर्छन् उसको हरेक कठिनाइमा साथ दिइरहन्छन् । यी राशि हुने पुरुष विवाहका लागी सबैभन्दा प्रफेक्ट मानिन्छन् । ती राशि यी हुन्ः
कर्कट राशिः ज्योतिषका अनुसार कर्कट राशिका पुरुषहरु विवाहका लागि अति नै योग्य मानिन्छन् । यिनीहरु पारिवारिक व्यक्ति हुन्छन् । यी राशि भएका पुरुषहरु विवाहपछि असल पति र जिम्मेबार पिता बन्छन् । भनिन्छ कि कर्कट राशिका पुरुषसँग उनीहरुका श्रीमती प्रसन्न रहन्छिन्।
मिथुन राशि: तपाई विवाहको लागि योग्य पुरुष खोजीरहनु भएको छ भने मिथुन राशि भएका पुरुषसँग विवाहको लागि भरोसा गर्नसक्नुहुन्छ । ज्योतिषका अनुसार मिथुन राशिका पुरुषले कहिले पनि सम्बन्धमा धोका दिँदैनन् ।
तुला राशि: तुला राशिका पुरुष सधैँ अरुको मद्धतको लागि तयार हुन्छन्। विवाहपछि यस राशिका पुरुषहरु आफ्नो पत्नीलाई हरेक कुरामा साथ दिन्छन्। तुला राशिका पुरुषहरु धेरै नै सहयोगी र मिलनसार हुन्छन्।
वृश्चिक राशि: ज्योतिषका अनुसार विवाहको लागि योग्य राशिमध्ये वृश्चिक पनि एक हो। भनिन्छ कि वृश्चिक राशिका पुरुषलाई युवतीले कुनै सोचविना नै अपनाउन सक्छिन् । यस राशिका पुरुष सधैँ आफ्नो जीवनसाथीप्रति उदार र लालायित हुन्छन् ।
यी बलियुड कलाकारहरुको साइड बिजनेस सुन्नुभयो भने होस उड्छ हेर्नुहोस !
आज सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको जन्मदिन, निकिताले रविलाई दिइन् यसरी शुभकामना